पोखराको पृथ्वीचोकमा पृथ्वी नारायण शाहको सालिक राखियोस् – Etajakhabar
पोखराको पृथ्वीचोकमा पृथ्वी नारायण शाहको सालिक राखियोस्
ताजा खबर :- पोखरा छिर्ने बित्तिकै एउटा ठूलो चोक छ, जहाँ ०६३ अघि पृथ्वीनारायण शाह र ०६४ पछि सहिद लखन थापाको सालिक थियो । अहिले पनि पोखरा बजार छिर्ने त्यस मुल चोकलाई पृथ्वीचोक भनिन्छ । त्यस चोकमा पृथ्वी नारायण शाहको सालिक भएको हुँदा त्यसलाई पृथ्वीचोक भनिएको थियो । तर त्यहाँ २०६३ साल पछि पृथ्वी नारायण शाहको सालिक छैन् । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा पृथ्वी नारायण शाहको सालिकलाई फालिएको थियो । जनआन्दोलनमा २४० वर्षको सामन्ती सत्ताको प्रत्येक मानी आक्रोषित जथ्थाले उनको सालिक भत्काएका थिए । २०६४ पछि राजनितिक सहमतिका आधारमा उक्त चोकमा नेपालको पहिलो सहिद लखन थापाको सालिक राखिएको हो । फेरि हालसालै लखन थापाको पनि सालिकलाई बाटो विस्तारको नाममा हटाईएको छ । सालिकलाई मध्यरातमा हटाईएको हो । लेखनाथ नगरपालिकाले साँघुरो चोकमा ठूलो ठाँउ ओगटेको सालिकलाई हटाई सानो ठाँऊमा उक्त सालिकलाई पुर्नस्थापना गर्ने बताएको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको सालिक रहेकोमा उक्त सालिकलाई हटाएर सहिद लखन थापाको सालिकलाई राख्नु कत्तिको सान्र्दिभक हो ?
राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह
पृथ्वी नारायण शाह राष्ट्र निर्माता हुन् । अंग्रेजको औपनिवेशिक विस्तारवादले भारत वर्षमा प्रवेश गरेकै ताका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एउटै शासन शुत्रमा बाधि विशाल र शक्तिशाली राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ एकीकरण अभियान शुरु गरेका थिए । उनले शुरु गरेको एकिकरण अभियानले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म पु¥याएको थियो । पछि सन् १८१४ मा अंग्रेजसँग भएको युद्ध पश्चात छलपूर्ण सुगौली सन्धिका कारण मेची महाकालीमा सिमित भएको हो । नेपाल आजसम्म कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशन नहुनुमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान रहेको बुझ्न सकिन्छ । पुरै ईन्डियालाई गुलाम बनाएको भारतले नेपाललाई उपनिवेशन बनाउन सकेको थिएन् । त्यस कारण पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताको रुपमा सम्मान गरिन्छ । तर कथित जनआन्दोलनको नाममा विभिन्न जाती जनजातीहरुलाई प्रयोग गरि ऐतिहासिक महत्वका सालिकहरुलाई तारो बनाईयो । कुनै पनि नेपाली जातीले पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी राजा मान्नु अत्यन्त गलत कुरा हो । जसको कारणले नेपाल उपनिवेशन हुनु परेन्, हाम्रो गौरव र हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराको समेत रक्षा भयो । उसैलाई गाली गर्नु अतिवादी सोच उपज मात्र हो । ऐतिहास नबुझेका र विदेशीबाट प्रयोग भई देशलाई जातीय द्वन्द तर्फ धकेल्न खोज्ने व्यक्तिहरुले गरेका घृणित षड्यन्त्र हो ।
पहिलो सहिद लखन थापा मगर
त्यस्तै लखन थापा मगर नेपालका पहिलो शहिद हुन् । उनलाई श्री ५ को सरकारबाट पहिलो शहिद घोषण गरिएको हो । उनी पुरानो गोरखा गणका कप्तान थिए । राणाको निरङ्कुश शासन विरुद्ध विद्रोह गरेका कारण उनलाई वि.सं १९३३ मा मनकामना मन्दिर परिसरको रुखमा झुण्डाएर मारिएको थियो । नेपाली जनताको हक हित र न्यायका लागि बहादुरी पूर्वक आफ्नो जिवनको आहुति दिने विर शहिदको योगदानलाई कहिले कसैले पनि अवमुल्यान गर्नु हुँदैन् । उनी भारत स्वतन्त्रताको समर्थक पनि हुन् । अंग्रेजलाई जंगबहादुरले भारतमा भएको विद्रोहमा सहयोग गरेका कारण पनि लखन थापा जंगबहादुर विरुद्ध गएका हुन् । लखन थापा भारतमा अंग्रेज उपनिवेशको विरुद्ध पनि थिए ।
के लखन थापा, मगर जाति वा जनजातीहरुको मात्र सहिद हो ? के पृथ्वी नारायण शाह बाहुन र क्षेत्रीको लागि मात्र राष्ट्र निर्माता हुन् ? हामी नेपालीले यी दुवै राष्ट्रिय विभूतिलाई सम्मान गर्नु पर्दछ । जातीयता जस्तो संकुचित सोचबाट माथी उठ्नु पर्दछ । आज पोखरामा लखन थापाको सालिक हटाईदा अपमानित महसुस गर्ने जनजातीले त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको सालिक किन ढालेका ? नेपाल र नेपालीको रक्षार्थ आफ्नो पुरैै जिवनलाई नै समर्पित गरेका राष्ट्र निर्मातको सालिकलाई हटाईनु नै गलत थियो । फेरि अहिले सहिद लखन थापाको सालिक हटाईनु पनि गलत हो । सहिद लखन थापा, पृथ्वीनारायण शाहद्वारा निर्मित नेपाली सेना भएको र पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै अंग्रेजको औपनिवेशिक विस्तारवादको घोर विरोधी भएको तथ्यलाई समेत दृष्टि गर्दै उक्त स्थानको नाम पृथ्वी नारायण शाहको सालिक रहेको कारणबाट पृथ्वीचोक रहन गएको र विगतमा भएको गल्लीलाई सच्चाउन सक्ने एउटा अवसर समेत भएको हुँदा उक्त चोकमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको सालिक राखियोस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ११, २०७४ समय: १४:३१:११